﻿﻿ Sample Page – MCMI
Master’s Degree (SWISS MBA – EUGS)
Master’s Degree (SWISS MBA – SSBH)
Master’s Degree (IES)
Consulting & Company Corporate Training
MCMI သည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးမှာ တည်ရှိနေသော Top Business Institute တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဦးဆောင်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေသူများ၊ စီမံခန့်ခွဲနေသူများနှင့် ကျောင်းသား၊ လူငယ်များအတွက် အဓိကအားထားရာ ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Best Team Memory
Class Room Teching
Shwe Phyu Plaza,2Floor, Mandalay, Myanmar.
09954329978, 09954329976, 09957320078
© 2020 MCMI. All rights reserved.